Umaka: imithethonqubo | Martech Zone
Khulisa Imizamo Yakho Yokumaketha yango-2022 Ngokuphathwa Kwemvume
NgoMsombuluko, Januwari 10, 2022 NgoMsombuluko, Januwari 10, 2022 Eric Tejeda
Unyaka ka-2021 ubungalindelekile njengonyaka ka-2020, njengoba inqwaba yezinkinga ezintsha ziyinselele abathengisi bezitolo. Abakhangisi bazodinga ukuhlala beshesha futhi besabela ezinseleleni ezindala nezintsha kuyilapho bezama ukwenza okwengeziwe ngokuncane. I-COVID-19 yashintsha ngendlela engenakuhlehliswa indlela abantu abathola ngayo nabathenga ngayo - manje yengeza amandla ahlanganisayo okuhluka kwe-Omicron, ukuphazamiseka kwe-supply chain kanye nomuzwa oshintshashintshayo wabathengi kuphazili esivele iyindida. Abathengisi abafuna ukuthwebula isidingo se-pent-up
Izinselelo Zokumaketha - Nezixazululo - zango-2021
NgoLwesithathu, Januwari 13, 2021 NgoLwesithathu, Januwari 13, 2021 U-Rich Smith
Ngonyaka owedlule kwakunzima kakhulu kubakhangisi, kuphoqa amabhizinisi cishe kuyo yonke imikhakha ukuba azungeze noma abeke amanye amasu esikhundleni sezimo ezingaqondakali. Kwabaningi, ushintsho oluphawuleka kakhulu kwaba umthelela wokuqedwa kwezenhlalo nokukhosela okukhona, okwadala ukuqhuma okukhulu ekuthengeni nge-inthanethi, ngisho nasezimbonini lapho i-ecommerce yayingakaze ibizwe ngaphambili. Lokhu kugudluzwa kuholele endaweni enabantu abaningi yedijithali, kunezinhlangano eziningi ezilwela abathengi